Indasitiri yekumusha: IMEX America inounza bhizinesi, kudzidza & kubatana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » Indasitiri yekumusha: IMEX America inounza bhizinesi, kudzidza & kubatana
Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • USA Kuputsa Nhau
Mune izvo zvakabhadharwa se "kudzoka kumba" kune epasirese bhizinesi zviitiko zveindasitiri, IMEX America ichaitika munaNovember 9-11 muLas Vegas. Iyo yegumi edition yeiyo show ine imba nyowani, Mandalay Bay, uye yakagadzirirwa kuendesa mikana yebhizinesi, chirongwa chinokurudzira chekudzidza uye zviitiko zvinonakidza zvemagariro, zvese munzvimbo yakachengeteka asi isina chena.
Vatengi vanogona kusangana nevatengesi vanotora zvikamu zvese zveindasitiri pachiitiko ichi.
Nzvimbo dzichatora nzvimbo kusvika ikozvino dzinosanganisira Australia, Korea, Singapore, Dubai, Italy, Boston, Atlanta, Hawaii, Switzerland, nePanama.
Mapoka emahotera kusvika parizvino achamiririrwa kubva kuRadisson, Wyndham Hotel Group, Mandarin Oriental Hotel Group, uye Associated Luxury Hotels International.
Chiratidziro chakakosha, sekugara, bhizinesi panhongonya uye vatengi vanogona kusangana nevatengesi ichiwedzera zvikamu zvese zveindasitiri. Izvi zvinosanganisira nzvimbo dzekuenda kuAustralia, Korea, Singapore, Dubai, Italy, Boston, Atlanta, Hawaii, Switzerland nePanama pamwe nemapoka ehotera Radisson, Wyndham Hotel Group, Mandarin Oriental Hotel Group uye Associated Luxury Hotels International. Argentina, Canada, Puerto Rico, Detroit, Memphis, Baltimore uye Loews Hotera ndevamwe varatidziri vakawedzera huvepo hwavo pachiratidziro.
Diversity, kutamba & yakatsaurwa chikamu chikamu
Iyo inokurudzira, yemahara chirongwa chekudzidza chiri kumhanya mushe show hachifanirwe kupotsa, uye chinotanga pa Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI, inoitika musi wa8 Mbudzi, zuva rakatangira IMEX America. Dr Shimi Kang vanobva kuYunivhesiti yeBritish Columbia vanoendesa Smart Muvhuro, vachiratidza nzira dzichangoburwa dzekutsvagisa, hunyanzvi, kubatana pamwe nekubudirira kwebhizinesi.
Zvikamu zvakatsaurwa zvemapoka akasiyana emabhizimusi zvinobvumidza vanopinda kuratidzira yavo Smart Muvhuro ruzivo. Kune dzidzo uye network chete revatungamiriri vemakambani paMusangano Musangano Foramu - yakagadzirirwa vakuru-vepamusoro makambani emakambani kubva kuFortune 2000 makambani - uye iyo nyowani Corporate Focus - yakavhurika kune vese vanoronga kubva kumakambani pamatanho ese. Vatori vechikamu vanogona kutarisira zvakadzama nhaurirano pamisoro senge musangano dhizaini, kutaurirana kunoshanda nevari kure timu vashandi, uye hutano hwepfungwa uye hutano.
Carina Bauer naRay Bloom
Sangano revatungamiriri vanogona kubatana uye kudzidza nevezera ravo kuChikwata Chehutungamiriri Musangano, rakagadzirwa neASAE. Mune fomati nyowani yemusangano ya2021, iyo Foramu inotarisa yakatarisana neshanduko yemabhizimusi mamiriro ayo masangano ave kushanda. Iyi foramu ichaongorora maitiro ekugadzirisa shanduko dzakakosha dzinowedzerwa nedenda, zvinoti tarisiro yepamusoro yenhengo, kuwedzerwa kwenhengo dzakasiyana, hunhu hwakasiyana hwenyika uye nekukurumidza kufambira mberi muhunyanzvi.
Hakuna kumbove nenguva iri nani yekutsigira zvakasiyana muindasitiri yezviitiko zvebhizinesi uye Iye Anoreva Bhizinesi anoita izvo chaizvo. Chiitiko chakabatanidzwa nemagazini yeIMEX neTW, inotsigirwa neMPI, inounza pamwechete boka revatungamiriri vechikadzi kubva mukati nekunze kwemaindasitiri kuti vataure nyaya nemazano avo. Kuda, kuita uye kuzvidavirira: Strategic chinangwa chekumisikidza vakadzi mune zviitiko chikamu chinoshanda chine matipi ekuti ungazadzise sei "chiratidzo chikuru," chakapihwa naJuliet Tripp, Mutevedzeri Musoro weGlobal Zviitiko, Chemical Watch. Michelle Mason, Mutungamiri uye CEO, ASAE uye chipangamazano Courtney Stanley, Courtney Stanley Consulting koka varume vaviri kuti vapinde mukutaurirana kwakasiyana siyana Kusiyana uye Gender Kuenzana - Vakadzi Tsvaga Kukurukurirana nevarume.
Zuva rega rega rinotanga neMPI keyword. Vanofambisa uye vanozungunusa kubva kunze kwebhizimusi zviitiko zvebhizinesi mumwe nemumwe anounza yavo yakasarudzika yepasi rose kuona kune show - tarisira mubairo-anokunda mubairo weHarvard akadzidziswa, mumwe we "anonyanya kufarirwa vanyori munyika" pamwe nemuvambi wesangano repasi rose rekutamba uye munharaunda.
Iyo Inspiration Hub iri zvekare kumba kuratidza dzidzo yepasi, kuendesa yakarongedzwa yakarongedzwa yemikana yekudzidza kugadzirisa zvido zvebhizinesi mukupera kwa2021. Zvirongwa zvinofukidza Kugadzira mukutaurirana; Kusiyana nekuwanika; Kugadzira uye tech; Bhizinesi kudzoreredza, Konisheni nhaurirano, Kuzvitengesa wega, uye Kugonesa.
Zviitiko zvemagariro zvinounza sizzle uye kushamisika
Ipo iyo showa ichiri muzinda webhizinesi uye kudzidza, kune zvakare mikana yakawanda yekubatana kunze kwenzvimbo yekuratidzira. Iyo Lip-Smacking Foodie yekushanya inopa yakaderera kuLas Vegas pamwe nezvimwe zvekudya zvakanakisa paStrip. Dzimwe nzendo dzinopa nzira yemukati munzvimbo mbiri dzinoyevedza: Kesari Muzinda uye Mandalay Bay.
Chakavanzika Rwendo ishamusi inoshamisa yezviitiko zvakasarudzika, nzvimbo dzinotonhorera, chikafu chinonakidza uye kambani hombe. “Inyaya yekuenda isingazivikanwe. Vanhu vanochengetwa murima kusvika nguva yekupedzisira - uye ndipo painoitika mashiripiti! ” anotsanangura Chief Anoshamisa Mupurisa Dave Green. Kune zvakare mukana wekupemberera pane zvinonakidza indasitiri zviitiko SITE Nite North America uye MPI Foundation Rendezvous.
“Hatigone kumirira kudzoka kweIMEX America uye nekuunza pamwe zviitiko zvedu zvebhizinesi. Kune vazhinji vari muindastiri, iyo showo inoita chikamu chakakosha mukugadzirisa kwavo bhizinesi uye inomiririra mukana wakasarudzika wekusangana nevavanoshanda navo uye vavakabatana navo vavasina kuona munenge makore maviri, ”anotsanangura Carina Bauer, CEO weImEX Group.
“Takanyatsogadzira showa ine bhizinesi pamoyo wayo pamwe nekuona kuti tinopa musika chiitiko chechiitiko chakakodzera nguva; isu tese tiri kushanda mukati. Vanopinda vanogona kuva nechivimbo chekuti takagadzira show yakachengeteka inosangana nezvinodiwa zvehutano nekuchengetedza, tichishanda padhuze neguta redu ratinoitira uye nzvimbo nyowani. Mandalay Bay. "
IMEX America inoitika 9 - 11 Mbudzi kuMandalay Bay muLas Vegas ine Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI, musi wa8 Mbudzi. Kunyoresa - mahara - tinya pano. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve sarudzo dzekugara uye kubhuka, tinya pano.
Nezve dzichangoburwa nhau nezve show, tinya pano. Teerera kuna Sachigaro weIMEX, Ray Bloom uye CEO, Carina Bauer, taura nezvehurongwa hweIMEX America, pent-up musika wekuda, Exhibitor uye mutengi mazinga ezvibereko mune dzichangoburwa Kukurukurirana naCarina.
2022 Honda Passport rally rori kukwikwidza muAmerican ...
Pakistan Airlines yamisa Kabul ndege mushure meTaliban ...
Kuenzana muChirwere Kuwana neWorld Tourism Magamba ...
2021 Honours ye IGLTA 37th Global Convention Yakaziviswa
Chikafu Yeuka Yambiro kune Vanofara Veggie Yenyika Brand
Busted! Vatorwa Vanoviga nekunwa muThailand bhawa
Ukraine neEuropean Union vanosaina Chibvumirano cheOver Skies
Delta Mhepo Lines inotenga makumi matatu ndege dzeAirbus A30neo
Zvinorwadza zveThailand zvekuvhara zvinofanirwa kumira, mabhizinesi anochema
FAA inorambidza ndege dzese dzeUS kubva kubhururuka pamusoro peAfghanistan
COVID yakauraya Ekundo! Aloha kuAfrica Shumba mu ...